घरेलु र प्रयोगशालाका अवस्थाहरूमा हङकङबाट phianites कसरी फरक पार्छ
फैशन, आभूषण र घडीहरू
एक हीरा भनिन्छ एक विशेष रूप देखि संसाधित प्राकृतिक खनिज (हीरा), मुख्य रूप देखि कार्बन अणुहरु। यो रासायनिक संरचना सामान्य गाल मा समान छ, तर, क्रिस्टल जाल को विशेष संरचना को लागी, जब यो काटिएको छ, यो एक अनोखी (तपाईं पनि भव्य बोल्न सक्छ) चमक प्राप्त गर्दछ।
मानिसजातिले यस पत्थरलाई पुरातनताका रूपमा चिनेका छन्, र यसको निष्कर्षमा र यसको प्रयोग यो सबैभन्दा रहस्यमय किंवदंतियों संग थियो र असाधारण गुणहरु संग प्रशंसा गरिएको थियो। अब कि मान्छेले कसरी कृत्रिम पत्थर सिर्जना गर्ने र औद्योगिक स्तरमा जिरकोनियम उत्पादन गर्न सिकेको छ (यो पनि एक विचित्रता हो), हीराको मूल्य कम भएन, तर यसको विपरीत। ठूलो हीराको स्वामित्वको अधिकारको लागि, र अहिले भयानक अपराधहरू सामूहिक हत्या सहित, प्रतिबद्ध छन्। र विश्वमा कुनै पनि महिला हो जुन यी अचम्मका खनिजहरूसँग गहनाहरू स्वीकार गर्दैनन्।
गहना व्यवसायमा, हीरे र फाइनान्साइट अब लगभग एक बराबर फ्यानमा प्रयोग गरिन्छ। निस्सन्देह, प्राकृतिक हीराहरूसँग उत्पादहरू धेरै महँगो हुन्छन्, त्यसैले सबैले खर्च गर्न सक्दैनन्। एक सुन्दर कान बाली वा लटकन सबैको लागि लुगा लगाउन चाहने, वित्तीय अवस्थाको बावजूद, र त्यसैले सस्तो जिरकोनियम लगभग चाँदीको उत्पादनमा पाइन्छ र बढ्दो सुनमा। बाह्य लक्षणहरू द्वारा क्यूबिक जिरोलोनियाको भेद कसरी फरक छ, धेरैलाई थाहा छैन, किनकि तिनीहरू किन जब यो खरीद गर्न कोसिस गर्दैनन्। वास्तवमा, यी दुई सामग्री अप्ठ्यारो लागी सूचकांकमा समान छन् जुन पहिलो हात गहनाहरूले पनि प्राथमिक निरीक्षणको लागि गल्ती गर्न सक्छन्। एक हीरा र क्युबिक जिरकोनिया को बीच अंतर, सबै भन्दा पहिले, यसको रासायनिक संरचना हो। यसको अतिरिक्त, एक हीरे पृथ्वी मा सबै भन्दा कठिन प्राकृतिक सामाग्री मध्ये (जसलाई फाइनल को बारे मा नहीं भन्यो) हो। हिरोइनका थुप्रै भौतिक परिमिति (घनत्व, थर्मल चालकता) पनि जिरकोनबाट निकै फरक छ। यसैले, प्रयोगशाला मा हीरे देखि phianites कसरि भेद को प्रश्न उठ्छ, उठ्छ।
तर तपाईं हरेक विशेष समयमा प्रयोग गर्नुहुन्न जुन एक विशेष प्रयोगशालामा एक गहने उत्पादन किन्न सक्नुहुन्न! विशेषज्ञहरु भन्छन् कि औसत व्यक्ति एक देखि एक पत्थर को भेद गर्न को लागि लगभग असंभव छ, खासकर यदि यो सानो छ। हीराको प्रामाणिकता पुष्टि गर्न, प्रत्येक उत्पादनमा सामान्यतया एक प्रमाणपत्र वा पासपोर्ट छ, जसले खनिजको गुणवत्ता, यसको शुद्धता र प्रामाणिकता पुष्टि गर्दछ।
क्यूबिक zirkonia र हीरे बीच भेद गर्ने एकमात्र तरिका को faceting द्वारा छ। र त्यसपछि यो विधिले मात्र काम गर्दछ जब पत्थर पर्याप्त हुन्छ। क्यूबिक जर्कियोडोनियामा, अनुहारहरू थोरै गोलाकार हुन सक्दछ (जसलाई हीरा मात्र हुन सक्दैन)। त्यसैले यस खातामा न्यूनतम शंकाहरूसँग, यो खरिद गर्न इन्कार गर्न राम्रो छ।
यद्यपि त्यहाँ केही तरिकाहरू छन् कि कसरी brilliants बाट क्यूबिक जर्कियोडोमा भेद गर्न, तर विशेष गरी तिनीहरूलाई गणना गर्न आवश्यक छैन। केही गहनाहरू एक ढुङ्गामा सास फेर्न सिफारिस गर्छन् (हीराहरू खोस्न नलगाउँछन्)। अन्य - तिनीहरूलाई गिलासमा राख्नु (गिलासको सतहमा हीराबाट अवश्य एक ट्रेस बनेको छ, तर उसले आफैलाई बिछोड्ने छैन)। तर गहना पसलमा, खरीदार सबै यी हेरफेर गर्न अनुमति छैन सम्भव छ, त्यसैले यो प्रयोग गर्न राम्रो छैन, तर विश्वसनीय विक्रेताहरु बाट महँगो उत्पादनहरू एक अपरिहार्य प्रतिष्ठाको साथ खरीद गर्न।
कार्निवल झुण्ड - सानो गहने
सुनको उच्चतम परीक्षण के हो?
यी पदहरूले एक ब्रान्डमा सानोमा लुकाउँछ
घरको चाँदी कसरी सफा गर्ने?
सूर्यलाइट गहनाहरू, जुन तपाईंले सपना देखाउनुहुन्छ ...
एक लटकन संग श्रृंखला - एक पसंदीदा सजावट
"द चेरी बागवानी", LOPAKHIN: विशेषता छवि
नुस्खा भूरा आश्चर्यजनक स्वादिष्ट
अप्रिल मा जन्म भएको थियो जो केटा, कल कसरी? हामी चर्च पात्रो के सल्लाह?
शीर्ष hairdressers (चेल्याबिन्स्क) प्रत्येक जिल्लामा यसको आफ्नै विशेषताहरु
एक राष्ट्र एक प्राणीय समुदाय हो
म कसरी थाह के मेरो स्मृति: megaresheniya!
आमाको दिन को भोज
खेती असाइन गर्दै छ? अर्थव्यवस्था निर्धारण: परिभाषा
सबै भन्दा राम्रो उद्धरण Nikoly Tesly
खेल चूल्हा: नक्सा सिर्जना